Vehivavy tsy dia nianatra loatra aho no sady zanak’olona sahirana.
Ny lehilahy miaraka amiko anefa sady manankarena no nahita fianarana. Milaza ho tia ahy izy nefa tsy tena tsapako izany, sady mampirafy be izy. Izaho nefa lazainy fa halainy ho vady. Tokony hisaraka aminy ve aho ?
Matoa sady miaraka aminao izy no miaraka amin’olon-kafa dia misy zavatra andrasany aminao fotsiny, ny lehilahy rahateo manao fy ny atsy mamy ny aroa. Mariky ny tsy fahamatoran’ny fitiavana rahateo ny fampirafesana. Tokony ho tsapany, noho izany fa porofom-pitiavana iray lehibe indrindra ny fifanajana, ka raha tsy misy izany eo aminareo dia tsy lalina sy tsy madio izany ny fitiavany anao. Etsy andaniny, efa fantatrao fa mampirafy izy, fantatrao ihany koa ny elanelana misy eo aminareo (harena sy fahaizana), izay tsy tokony hametraka olana anefa rehefa tena ampy ny fifampiresahana sy ny fifankahazoana. Manoloana izany rehetra izany dia anjaranao no mandanjalanja, na zakanao na tsia ny fiarahana aminy. Mahasambatra anao ve izany fifandraisanareo izany ? Araka izay no anapahanao hevitra ny amin’ny mbola hiarahanao aminy ihany na tsia.
Niaraka tamin’olona aho dia nisarahako izy avy eo, stria fantatro fa nampirafy ahy. Tsy nanaiky izy, dia nilefitra aho, saingy rehefa miady izahay ka tezitra izy dia lasa izy mankany amin’ilay sipany. Leo aho ny farany dia nisarahako izy. Amin’izao anefa izy, mangata-maso be amiko foana. Henoko tamin’ny namany fa nisaraka izy sy ilay vehivavy. Mbola afaka mifamerina ve izahay ?
Miankina amin’izay ifanarahanareo roa tanteraka izany. Mino ve aloha ianao fa mbola tena te hiarakaaminao marina izy ? Efa nisy dingana nataony ve nanatonany anao indray sa nionona tamin’ilay hata-masony fotsiny ianao ? Ary ny anao ve, fitiavana sa fiantrana ? Samy hafa tanteraka mantsy ireo. Sao ny alahelonao fotsiny no mahatonga anao te hiverina aminy indray fa efa tsy mitempo ho azy intsony ny fonao. Ary ny toetrany tsy zakanao teo aloha, mbola ho zakanao ve raha miverina ? Sa inona no fepetra horaisinao hisorohana ny mety hiverenan’izany indray ? Ireo rehetra ireo no tokony hodinihinao tsara raha mieritreritra ny hifamerina aminy ianao. Tsy misy tokony hahamaika anao hifamerina aminy koa anefa , raha mbola tsy naneho fihetsika na fiteny mazava izy fa maniry ny hiaraka aminao indray.
Tiako loatra ny vadiko dia tena saro-piaro be aminy aho. Inona no tokony ataoko mba ialako amin’izany fahasarota-piaroko izany ?
Efa zava-dehibe ny fahatsapanao tena fa saro-piaro tafahoatra ianao. Dingana iray lehibe mankany amin’ny fiovan-toetra izany. Ny manaraka dia mila miresaka am-pitoniana amin’ny vadinao ianao, indrindra raha misy zavatra ataony, fihetsika na fiteny, mety mandrongatra ny hasarotam-piaronao. Tsory aminy mihitsy ny marina. Aza raràna be fahatany tsy hanao izay tsy tianao anefa izy, fa ampahafantaro azy fotsiny fa misy izany zavatra tsy zakanao izany. Fahatelo, ezaho fantarina izay tsara eny aminao, na endrika ivelany io na toetra… Reseho lahatra ny tenanao fa tsara, manana ny maha-ianao anao… Miezaha matoky tena fa io no fototry ny hasarotam-piaro tsy mitombina. Farany, rehefa manomboka miakatra ilay hasarotam-piaro ka mitady hanao fihetsika na fiteny tsy voahevitra ianao dia miantsoa olona iray atokisanao, tantarao azy ny mavesatra ao am-ponao. Raha tsy misy izay dia mitadiava zavatra ampiasana saina : mamaky boky, mijery horonan-tsary mampihomehy…